हिमाल खबरपत्रिका | विकासमा लालायित महाशिला !
विकासमा लालायित महाशिला !
सानो आय भए पनि सही दृष्टिकोण भए धेरै काम थाल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पर्वतको सबभन्दा सानो महाशिला गाउँपालिकाले दिएको छ।
पर्वत जिल्लाको सबभन्दा सानो र स्रोतसाधनमा कमजोर मानिन्छ, महाशिला गाउँपालिका । सानो भूगोल, सानो आय भए पनि सही योजना र दृष्टिकोण भए धेरै काम थाल्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि यही गाउँपालिकाले दिएको छ ।
‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम ल्याएको यो गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा ६०० जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘महाशिला विकास स्वयंसेवक’ बनाउन आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । तालिममा कोही रोजगार नभएका घरपरिवारका सदस्यहरूले प्राथमिकता पाउने गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार, २२०० परिवार रहेको यो गाउँपालिकामा करीब एक हजार परिवारमा कोही रोजगार छैनन् ।
गाउँपालिकाले तालिमदेखि शारीरिक व्यायामसम्म गराएर खटाउने कर्मचारीहरूलाई ‘महाशिला विकास स्वयंसेवक’ भनिने छ । उनीहरू विद्यालय, वन, सडक, कृषि फार्म र स्वास्थ्य संस्थादेखि सहकारीसम्म खट्नेछन् । तीन महीनाको तालिम पछि उनीहरूले मासिक रु.६ हजार तलब पाउनेछन् । तालिम अवधिमा मासिक रु.३ हजार र दैनिक रु.२५ खाजा खर्च पाउनेछन् । तालिमपछि उनीहरूले महीनामा १५ दिन घरमै काम गरेर परिवारमा समेत रोजगारी र आम्दानी गराउनुपर्नेछ ।
त्यसअनुसार, गाउँपालिकाले ६०० जनालाई प्लम्बिङ, लेखा, वन व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी, शिक्षक, अनमी, स्वास्थ्य सहयोगी, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कृषि कार्यकर्ता, ज्येष्ठ नागरिक सहयोगी, चिया खेती, अलैंची खेती, वडा कार्यालय र गाउँपालिका व्यवस्थापन तालिम दिनेछ । सडक रक्षकमा सबभन्दा बढी २५० जनशक्ति मागिएको छ । त्यसपछि सिकर्मी र डकर्मीमा ६०, विद्युत् रक्षकमा २० र होमस्टे चलाउने पर्यटन स्वयंसेवीमा १० जनालाई तालिम दिने गाउँपालिकाको तयारी छ ।
गाउँपालिकाले तालिम अवधि असार मसान्तसम्मका लागि रु.९५ लाख बजेट छुट्याएको छ । तालिमका लागि छानिएका हरेकले उमेर, रुचि र क्षमता अनुसार गाउँमै समृद्धिको खोजी गर्ने अवसरको रूपमा यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागिएको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । स्वयंसेवकहरूले परिवारका सदस्यलाई स्वरोजगार बनाउनुपर्ने शर्त छ । त्यसका लागि तरकारी खेती गर्ने परिवारले कम्तीमा तीन रोपनी, खाद्यान्न खेती गर्नेले १० रोपनी, टनेलमा गोलभेंडा रोप्नेले कम्तीमा पाँच वटा टनेल, माछापालकले पाँच रोपनीको पोखरी, सुन्तला वा कागती खेती गर्नेले कम्तीमा सय बोट रोप्नैपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यस्तै, पशुपालन क्षेत्रका स्वयंसेवकका परिवारले कम्तीमा पाँच वटा गाईभैंसी पाल्नुपर्ने, कुखुरापालनमा कम्तीमा ३०० कुखुरा हुर्काउनैपर्ने शर्त छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल यसबाट आगामी पाँच वर्षमा हरेक स्वयंसेवकका परिवारले व्यावसायिक बनेर आम्दानी गर्ने बताउँछन् । त्यसरी व्यवसाय गर्नेलाई सहकारीमार्फत ऋण उपलब्ध गराउने र उनीहरूका उत्पादन पोखरा लगायतका शहरमा पुर्‍याउन गाउँपालिकाले ढुवानी खर्च बेहोर्ने योजना उनले सुनाए । एकै पटक ६०० जनालाई रोजगारी दिने अभियान सफल पार्न तत्कालका लागि ‘महाशिला विकास कोष’ बनाउने र त्यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न ‘विकास स्वयंसेवक सहकारी’ खोल्ने योजना छ ।
श्रमिक, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता र सहकारीका कर्मचारीमा हुने खर्चबाट स्वयंसेवकको तलब व्यवस्थापन गर्ने, त्यसका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट रु.४ करोड र स्थानीयवासीबाट रु.६ करोड संकलन गरेर रु.१० करोड पूँजी भएको सहकारी स्थापना गर्ने योजना छ ।
अरू पनि नमूना काम
महाशिला गाउँपालिकाले अरू नयाँ काम थालेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने समस्या हल गर्न कक्षा ३ सम्म पढ्ने सबैलाई दिउँसो खाजा खुवाउन थालेको छ । सबै विद्यालयमा शैक्षिक योजना बनाउने, मल्टीमिडिया र अंग्रेजी माध्यममा पढाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाका काठको पोल फेर्न यस वर्ष ४०० वटा फलामका पोल किनिएको र अर्को वर्ष सबै पोल फलामको हुने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार, सात मिटर फराकिलो महाशिला चक्रपथ बनाउन उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय भइसकेका छन् । सबै वडामा इन्टरनेट र कागजरहित सेवा दिन थालेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । उनले ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत वडा नं ६ फलामखानीको दलित बस्तीका ११६ घरमा धारा पु¥याउने खानेपानी योजना निर्माण चरणमा रहेको सगर्व सुनाए ।
‘बहुलाएर लागेको छु’
पर्वतको महाशिला गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेल विकास योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिको रूपमा चिनिन्छन् । २०५४ सालमा जिल्ला विकास समिति सदस्य भएका पौडेलले नेकपा (एमाले) को राजनीतिसँगै गैरसरकारी संस्थामा पनि काम गरे । पार्टीको आठांै जिल्ला अधिवेशनमा जिल्ला अध्यक्षमा पराजित भएपछि केही समय राजनीतिमा निष्क्रिय देखिएका पौडेल गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि ‘केही गर्न’ कस्सिएका छन् । “गाउँको विकासमा सबैले केही न केही योगदान गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउन म चाहिं बौलाहा भएरै लागेको छु ।”